Izixazululo zeBlow Molding - Ubunjiniyela beDelta - Thuthukisa ukusebenza kwakho kahle!
Izixazululo zeBlow Molding: imishini yokukhiqiza nokufakwa kwamabhodlela epulasitiki neziqukathi: ama-palletizers, abahloli bokuvuza, ...
Ukunamathisela - Kukhihliza amagwebu
IDelta Engineering Automation (iRomania)
Izixazululo Blow Molding
Izixazululo zethu zokupakisha zomkhakha wokubumba igalelo zibandakanya izinhlobo eziningi zama-bagger, amaphakethe wetreyi, ama-palletizers nama-depalletizers, ama-pack pack, imigudu enciphayo, izindawo zokugcina amathreyi, izixazululo zepakethe ...
Zuza kokuhlangenwe nakho kwethu ngokulawulwa kwekhwalithi yamabhodlela akho epulasitiki noma iziqukathi: ukuhlolwa kokuvuza, ukuhlola isisindo, imishini yokuhlola eyehlayo ...
Abahambisa amabhodlela (ibhande elicwebezelwe, iketanga, ukubamba uhlangothi), ukuphatha ipallet, izinyusi, abashintshi bomgwaqo…
Isikhwama sokubala izindleko
E-Delta Engineering, sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwama-25 ku izixazululo ze-blow molding.
Kusukela ekusungulweni kwethu ngo-1992, besilokhu sigxile ku izidingo zamakhasimende ethu. Ngokuqondile, ekwakhiweni kwe- uhla olunzulu lwezixazululo ezinkingeni izinkampani ezikulo mkhakha ezibhekana nazo.
Ukwenza isibonelo, ulayini wethu womkhiqizo ufaka ama-palletizers kanye nama-depalletizers, ama-tray packers, imishini yokulawula ikhwalithi njengabahloli bokuvuza noma abahloli besisindo, ama-bagger, imigudu enciphayo, ama-pack pack, izixazululo zepakethe, ama-silos, ama-warehouses, amasistimu wokukhipha, imishini yokusika, ama-conveyors , amatafula okupholisa nawabhafa, okwehlisa amatafula, okhetha amabhodlela, izishintshi zemizila, izifaki zebhodlela, izilawuli zomugqa, isibambi sezinto zokufaka, izifaki ze-plasma…
Ngamafuphi, imishini ehlukahlukene nezixazululo ze- ukukhiqizwa nokupakishwa kwamabhodlela epulasitiki neziqukathi!
Ngaphezu kwalokho, inhloso yethu yile:
Thuthukisa ukusebenza kwakho kahle!
Kuze kube manje, sakha futhi senze izixazululo ezithuthukisa izinqubo zokukhiqiza zamakhasimende ethu, ngokunciphisa umsebenzi wezandla, izinto zokupakisha kanye nezindleko zokuhamba.
Ngenxa yale ndlela, iDelta Engineering isibe omunye wabahlinzeki abahamba phambili bezixazululo ze-automation ngoba umkhakha igalelo ekubumbeni.
Impumelelo yethu isekelwe anhlobonhlobo acatshangelwe kahle igalelo ekubumbeni izixazululo.
Ngaphezu kwalokho, kungachazwa futhi ngabasebenzi bethu abanekhono, ukwethembeka kwabo ngakho-ke ukuqoqwa kwe- Okuhlangenwe nakho, ezisiza kakhulu amakhasimende ethu.
Esinye isici ukuthi innovation. Ubungcweti bethu bubonisa izindinganiso eziphakeme esizibekele zona njengomholi wezimakethe kanye nomkhakha embonini yomfutho ebumba engezansi.
Futhi, okokugcina, sibonga ukukhula kwethu ekushayeleni okungapheli ukuze sithuthukise service ngisho nangaphezulu: silwela ukufakwa okuhle kakhulu futhi ukwesekwa ngemuva kokuthengisa.
Ngenxa yalokhu, sikulungele ukuhlangana nezidingo zamakhasimende ethu emhlabeni jikelele.